ठमेलमा वेटर भएर सेकुवा बेच्दै, वल्र्ड कप देखाउँदै महावीर पुन – MeroJilla.com
ठमेलमा वेटर भएर सेकुवा बेच्दै, वल्र्ड कप देखाउँदै महावीर पुन
नेपाली सूचना र सञ्चार जगतमा वायरलेस प्रविधिमार्फत दूरदराज पुगेका सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन यतिबेला राजधानीकाे ठमेलमा सेकुवा बेच्दैछन् ।
ठमेलकाे मण्डला स्ट्रिटमा देख्न सकिन्छ पुनकाे रेष्टुरेन्ट ‘महावीर दाइ’ज रेष्टुरेन्ट ।’ विश्वकप फुटबल सुरु भएपछि उने मेनुमा नयाँ अाइटम थपेका छन्, महावीरकाे सेकुवा । सेकुवामा ब‌ंगुर र खसीकाे मासु प्रयाेग गरिन्छ । पुनका अनुसार कुखुराकाे पखेटा फ्राइ पनि त्यत्तिकै स्वादिलाे छ ।
त्यहाँ खानाकाे मज्जा लिदै खेल हेर्न बिहीबार भीड लागेकाे थियाे । बाँकी खेल हेर्न पनि उत्तिकै भीड लाग्ने पुनकाे ठम्याइँ छ । रेष्टुरेन्टमा पुन अाफै वेटर हुन् । उनले भनेका छन्, ‘रेष्टुरेन्ट र विश्वकपले मलाई जागिर दिएकाे छ ।’
तर रेष्टुरेन्ट सञ्चानल गर्नुकाे उद्देश्य व्यापारमात्र हैन, राष्ट्रिय अाविष्कार केन्द्रबारे जानकारी दिनु र केन्द्रसँग जाेडिन चाहनेहरुलाई प्लेटफार्म उपलब्ध गराउनु रहेकाे पुन बताउँछन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पुनले खान, फुटबल हेर्न र अभियानमा जाेडिन सबैलाई अपीलसमेत गरेका छन् ।
महावीर पुनसँग भेट्न, केन्द्रबारे बुझ्न र अन्तरक्रिया गर्न रेष्टुरेन्ट सहज माध्यम भएकाे अधिकांशले बताए । पुनले बिहीबार रेष्टुरेन्टमा अाएका शुभचिन्तकलाई मनैबाट ‘धन्यवाद’ दिएका छन् ।
उने रमाइलाे पाराले भनेका छन्, फोन गर्नुहोस र आउनुहोस । अनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा पनि छलफल गरौंला । सेकुवा र अन्य खानेकुराहरु खानै पर्छ भन्ने छैन ।
महावीर पुनकाे फेसबुक स्टाटस र तस्बिर
हिजो Mahabir’s Center for Nepal Connection ठमेलमा World Cup हेर्न आउनु भएकाहरु लाई धन्यबाद. हिजोको फोटो हेर्नुहोस. एक महिना सम्म सबैलाई स्वागत: नयाँ मेनु – महाबीरको सेकुवा थपिएको छ. फुटबल खेल हुन्जेल सम्म म आफैले पनि Waiter को काम गर्दै तपाईंहरुको सेवा गर्नेछु. फुटबल खेलले गर्दा मैले पनि Job पाएको छु, धन्य World Cup !!!
आउनुहोस बंगुर, खसीको सेकुवा, कुखुराको पखेटा फ्राई तथा अन्य खाने कुरा सहित ठुलो पर्दामा फुटबल हेर्ने र रमाइलो गर्ने मौका आएको छ. ठेगाना – मण्डला स्ट्रिट, ठमेल काठमाडौँ. मेरो फोन 9841592361. फोन गर्नुहोस र आउनुहोस. अनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा पनि छलफल गरौंला. सेकुवा र अन्य खानेकुराहरु खानै पर्छ भन्ने छैन.